Fatahaada Wabiga Shabeelle oo goysay Buundada Warmaxan ee Gobolka Shabeellaha Hoose – HalQaran.com
Fatahaada Wabiga Shabeelle oo goysay Buundada Warmaxan ee Gobolka Shabeellaha Hoose
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya, in Wabiga Shabeelle uu fatahaad ku sameeyay tuulooyin ka tirsan gobolkaasi.
Waxaa lagu soo warramayaa inuu go’ay waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, iyadoo biyuhu ay waddadu ka gooyeen buundada Warmaxan, waxaana kala go’an isu socodka dadka iyo gaadiidka.
Fatahaadan ayaa ka dhashay dhibaatooyin dhinaca nolosha iyo caafimaad darro dadka ku nool deegaannada gobolka Shabeellaha hoose oo ay wajahayaan.
Ugu dambeyn, qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro, islamarkaana wax laga qeybto dhibaatada ay sababtay Fatahaada.
Tags: Buundada Warmaxan, Fatahaada wabiga Shabeelle